All ku saabsan Hard Drive Recovery ah Barzakh, oo ah Barzakh, Recovery
Maqaal qoruhu u qaybsan yihiin laba nooc, mid waa Primary oo kale waa xijaab Sare ama macquul ah. Risaalo Primary waxaa loo isticmaalaa si loo soo dajiyo nidaamka qalliinka sidaas waxaa lagu magacaaba sida Risaalo ka firfircoon iyo xijaab sare waxaa loo isticmaalaa sida meel lagu kaydiyo. Waxad abuuri kartaa afar qoruhu Hoose iyo 24 maqaal qoruhu macquul ah. Si aad hore ula maqaal qoruhu u shaqeeyaan, waxaan u baahan nahay in la ogaado sababta aan u baahan tahay si ay u abuuraan qoruhu badan. Waxaan u baahanahay si loo soo dajiyo nidaamka qalliinka badan ama isticmaalka wax ku ool ah oo lagu keydiyo, faylasha nidaam gaar ah oo ka files user, sii nidaamka ammaan ah oo la ilaaliyo, si gurmad faylasha nidaamka of nidaamka qalliinka.
Barzakh Recovery waa meel gaar ah lagu kaydiyo halkaas oo gurmad u ah nidaamka qalliinka loo kaydiyaa. Waxay hayaan image gurmad nidaamka lagu rakibay hawlgalka iyo sidoo kale software lagu rakibay, darawallada qalab iyo goobaha nidaamka. Haddii shil nidaamka sabab kasta ha ku nidaamka ka hawlgala in dib loo kartaa image dib u soo kabashada oo dhan software iyo goobaha wada.
Part1: Sidee si meesha looga saaro iyo in la abuuro xijaab soo kabashada
Part2: Top 5 drive adag software kabashada xijaab
Part3: Kala duwanaanshaha u dhexeeya Windows 7 iyo daaqadaha xijaab 8 kabashada
Qeybta 1: Sidee si meesha looga saaro iyo in la abuuro xijaab soo kabashada
Haddii aad tahay Windows 8 user ah, aad horey u leh dhibaatada ay ogaadaan in dib markii rakibidda Windows 8 bannaan ee kaydinta heli karo waa eego in ka yar in lagu sharxay. Kuwaas waxaa dhacay labo sababood. Laakiin inta badan sababta waa in meel bannaan oo kaydinta ayaa waxaa kujira Windows kabashada image dhowr gigabytes ama mararka qaar alaab-qeybiye nidaamka ka mid ah oo u gaar ah xijaab soo kabashada. Inta badan PC casriga ah yimaado oo leh ugu yaraan 500 gigabytes ee kaydinta, iyo tan aan iyaga waa dhibaato weyn. Laakiin kuwa isticmaala PC Ultra-buugga 64 gigabytes ama 128 gigabytes ee kaydinta SSD, degan 10 ama ka badan gigabytes ee kaydinta ay Image Windows Recovery waa dhibaato weyn. Xalku waa mid aad u fudud. Waxaad dhaqaajin karin xijaab soo kabashada warbaahinta dibadda ama la wado iyo tirtirto xijaab dib u soo kabashada oo bilaash ah meesha bannaan ee la haysto.
Bal aynu eegno sida ay u tirtirto xijaab soo kabashada ee Windows 8. Hadda raac talaabooyinka soo socda:
Talaabada 1: xirmaan drive USB ah ugu yaraan 16 gigabytes ee kaydinta ah (Waxaad u baahan tahay meel bannaan oo dheeraad ah oo lagu keydiyo haddii size Risaalo soo kabashada waa weyn). Drive USB ayaa la formatted doonaa ka hor inta uusan xijaab soo kabashada. Sidaas, oo dhammu waxay xog muhiim ah gurmad ka drive USB ah.
Talaabada 2: Tag screen Start iyo nooca "Abuur A Recovery Drive". Beddel filter baadi Settings iyo dooro "Abuur drive soo kabasho" in aan bilowno Recovery Drive Wizard. Haddii si degdeg ah ay gacanta ku account user fasax ka dibna riix badhanka haa.
Talaabada 3: Burcad barnaamijka "saaxir Recovery Drive" iyo hubi "Copy xijaab soo kabashada ka PC in ay drive ka soo kabashada" doorasho iyo weeraray button Next.
Tallaabada 04: On shaashadda soo socda doorteen drive USB iyo soo socota ka dhacay.
Tallaabada 05: On shaashadda soo socda digniin ka soo muuqan doona isagoo sheegay in dhammaan faylasha ku drive ee laga tirtirayaa. Haddii aad qabto wax files shakhsiga ah drive ka, hubi in aad xoojiyaa files ah. "Haddii aad horey u gurmad wadid aad USB ka dibna ku dhuftay soo socda. Haddii aad illowdo in aad gurmad xogta aad ka dibna xogta ugu horeeyey ee ka USB drive ka dibna ku dhuftay soo socda.
Talaabada 6: Ka dib markii Windows dhameystiray dayanayaan xijaab kabashada in USB drive, fariin arbushin doonaa isagoo sheegay in aad dib u heli kartaa meel ka mid ah iyadoo la tirtirayo xijaab soo kabashada. Iyo sidoo kale muujinaya khiyaar ah in ay tirtirto xijaab soo kabashada.
Tallaabo 7: Riix "Delete xijaab soo kabashada." Waxaa idin ​​tusin doonaa digniin ah oo oranaya, iyadoo la tirtirayo Risaalo, waxaad lacag la'aan ah karo meel drive qaar ka mid ah, laakiin aan xijaab soo kabashada aan aad u soo celin karto Windows ah. Sida aad hore u dhaqaaqay aad xijaab kabashada in drive USB ah, uma baahnid in aad dareento in xiisad kasta. Hadda waxaad tirtiri kartaa xijaab soo kabashada.
Tallaabada 08: Riix ah "tirtirto" button in ay tirtirto ah xijaab Windows Recovery.
Kadib markii uu dhamaystay hawsha, Windows ku tusi doona sida badan meel aad dib iyadoo la tirtirayo xijaab soo kabashada.
Hagaha kor ku tallaabo-ka-tallaabo si loo soo saaro qoruhu waa shaqeeyaan oo kaliya Windows 8. Haddii aad rabto in aad tirtirto qoruhu soo kabashada in habab kale oo qalliin, waxaad ka akhrisan waxaa laga yaabaa in sidii ay u tirtiri xijaab drive adag .
Laakiin mararka qaarkood waxaan ku xanuunsado oo ka reinstalling Microsoft Windows ay sabab u tahay weerar spyware xun gaadho ama reformatting adag la wado haddii computer ma laha xijaab soo kabashada. Reinstalling Windows markaas Reload dhammaan codsiyada iyo dib goobaha oo dhan waa hab xanuun badan iyo waqti lumis iyo foosha xun. Laakiin waxaad ka boodi kartaa this habka waqti ay si fudud u gurmad aad immika lagu rakibay Windows codsiga loo baahan yahay iyo goobaha haddii aad abuuray xijaab soo kabashada ka hor. In la abuuro xijaab soo kabasho, akhri sida loo hadlo xijaab drive adag .
Qeybta 2: Top 5 drive adag software kabashada xijaab
Iyadoo maaraynta maqaal qoruhu disk adag drive, qalad yar oo keeni kara in ay tirtirka ama formatting ee qoruhu. Natiijadan ayaa waxa ay ka mid ah laga badiyay xijaab guud ee xogta weyn noqon doonaa ba'an. Xogtan ma la raadsan karaan mid ka mid utility ka mid ah nidaamka qalliinka. Laakiin halkan waxaa ka mid ah software fiican la heli karo si uu kaaga caawiyo sanaanayaa xogta aad, iyo sidoo kale xijaab guud. Halkan waxa ku jira ugu fiican shan barnaamijyada soo kabashada xijaab drive adag:
Operation System taageeray
02. 7-Data Recovery ah Barzakh, $39.95 iyo sare Windows 7/8 / Vista / XP
03. @ Active Recovery ah Barzakh, Free Windows 7/8 / XP / Vista / 2003/2008/2012 / WinPE
04. Xiddig Phoenix ah Barzakh, Recovery - Professional $ 99 Windows 7/8 / Vista / XP
05. TestDisk, Data Recovery Source Open Windows NT4 / 2000 / XP, 2003 / Vista / 2008/7, Linux, Mac OSX
Wondershare Kabashada xogta waa 1 drive adag qalabka kabashada xijaab sare. Waxay awood u isticmaala inuu ka soo kabsado ku saabsan 550+ noocyada files ka qalabka oo dhan lagu kaydiyo, drives adag, telefoonada gacanta, camera digital iyo sidoo kale iPod iyo MP3 / 4 ciyaartoyda. Waxaa ka mid ah afarta nooc oo ah hab-kabashada iyo mid ka mid ah waa soo kabashada xijaab inuu ka soo kabsado qoruhu lumay ama u kharribmay. Read guide on sida inuu ka soo kabsado qoruhu .
Afar hab kabashada: badiyay file, saaxir, xijaab iyo soo kabashada cayriin.
In ka badan 500 oo ah qaabab file taageeray.
Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh doorasho ka hor soo kabashada.
Sifeey iyo raadin file magac, taariikhda, size.
Users joojin kartaa dhowr mar kasta.
Interface waa user saaxiibtinimo.
Habka Recovery waa sida tallaabo hagitaan talaabo talaabo. 3 tallaabo ka heli doontaa files tirtiray dib.
Waxay leedahay taageero ugu qaab file.
Faylal ay ka telefoonka gacanta iyo MP3 / 4 ciyaaryahan oo sidoo kale loo soo saari karaa.
Software waa weyn wax yar la 23.9MB.
7-Data ah Barzakh, Recovery:
7-Data Recovery ah Barzakh, waxaa loogu tala galay inuu ka soo kabsado xogta ka kharribeen, lumay, la tirtiro ama formatted qoruhu la dhab ahaan qaab-dhismeedka ka mid ah kuwa asalka tirtiray shil. Software kabashada Tani waxay kaloo ka caawisaa inuu ka soo kabsado xogta ka drive burburtay oo ku kharribeen adag, repartition disk ah (Fdisk) ama xijaab dib-u-formatted disk iwm
Nidaamka File oo ay taageerayaan barnaamijka waa NTFS, NTFS5, EXFAT, FAT32, FAT16 iyo FAT12.
Taageerada ku dhowaad qalabka lagu kaydiyo sida, Sata HDD, SSD, HDD USB, USB Flash Drive, SCHI HDD, weerar Hardware, kaarka flash Compact, Memory ul Pro, iPod iyo qalabka kale ee lagu kaydiyo.
Taageerada Windows 8/7 / Vista / XP / Server Edition 2008.
Taageerada tiro balaadhan oo ah soo saarayaasha oo magdhow disk digital sida, Digital, Seagate, ajende, Silicon Power, Fujitsu, Samsung, HP iyo kuwa kale.
Taageerada SanDisk, Sony, Toshiba, Samsung, ajende, Kingston, KingMax, Hitachi, a-Data kaararka xusuusta.
Taageerada raadinta by Filename, Type, Goobta, Extension, Size, Taariikhda abuuray, iwm
Waa arrin aad u fududahay in la isticmaalo iyadoo talaabo habka saaxir tallaabo.
Waa in la soo celiyo xogta oo dhan cayn kasta oo qoruhu eegin burburtay, kharribeen ama laga badiyay, formatted awoodaan.
Files soo kabsaday waxaa la geeyaa hab la mid ah ay goobta hore.
Interface ma aha user saaxiibtinimo.
Isticmaalayaasha aan ku eegaan karo files ka hor soo kabashada.
Active @ Barzakh Recovery:
Recovery @ Barzakh Active waa aalad kama dambaysta ah soo kabashada laga heli karaa sida freeware ah oo ay la socdaan qoraalkii ay bixisay. Utility Tani waxay ka caawisaa si loo soo celiyo tirtiray oo waxyeelo drives macquul ah oo qoruhu gudahood DOS iyo Windows deegaanka. Feature Simple QuickScan kabanayso dhawaan tirtiray xijaab iyo heerka hoose feature scan sare kabanayso qoruhu in la tirtiro dheer ka hor iyo dib-u-formatted ama dib-u-xijaabi.
Nidaamka ay taageerayaan file: exFAT, Ext2 / Ext3 / Ext4.
QuickScan ogaadaa tirtiray laakiin aan dib-u-formatted qoruhu.
SuperScan ogaadaa qoruhu dhaawacan iyo dib-u-formatted.
Kaabta ama soo celin xijaab haddii khasaare xogta.
VMWare, xogta disk cayriin ama ciriiri la soo kabsaday karo
Waxa kaliya ma ahan kabanayso xogta laga nooc kasta oo qoruhu laakiin sidoo kale xog gurmad by qaybaha.
Version ayaa lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah dadka isticmaala.
Waxaa mararka qaar ay dhibaato ka soo kabsanaya dib-u-formatted xijaab.
Waxa kaliya ee aan nidaamka xijaab dib u soo celisa.
Xiddig Phoenix ah Barzakh, Recovery - Professional
Xiddig Phoenix Recovery ah Barzakh, waa barnaamij soo kabasho ugu qiimeeyo xijaab in dhammaynaya hanaanka soo kabashada si deg deg ah oo dhan Windows drives adag iyo qalabka lagu kaydiyo.
Waxay leedahay Recovery ceeriin ah oo awood u isticmaala inuu ka soo kabsado xogta ka files warbaahinta u kharribmay.
Waxaa soo kaban doontaa wayna sooceliye tirtiray iyo emails lumay ee MS Outlook.
Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala in ay ku eegaan files hor gujinaya soo kabsado.
Ka hor inta soo kabashada, waxaa cadaadin doonaan files si toos ah.
Ma aha oo keliya aalad kabashada xijaab laakiin dhan-in-mid qalab kabashada xogta.
Emails la soo kabsaday karo.
Software waa mid aad u qaali ah marka la barbar dhigo software kale.
TestDisk waa OpenSource software kabashada xogta awood badan. Waxaa la qorsheeyay in uu caawiyo kabsado qoruhu laga badiyay, tirtiray ama dhaawac iyo sidoo kale hagaajin disk in aan kabaha ha. Waxa kale oo ay soo kaban karto, miiska xijaab. TestDisk shaqeeya arday iyo khubaro xirfad leh soo kabashada xogta labada.
Soo kabashada shaqeeya miiska xijaab.
Waa awoodaan inay ka bogsadaan nidaamka file FAT32 gurmad.
Waxay kaa caawin doona dadka isticmaala dhiska qaybaha boot.
Waa il qalab furan sidaas awgeed waa lacag la'aan ah si ay u isticmaalaan.
Waxa ay taageertaa dhamaan nidaamyada hawlgalka.
Khubaro kabashada Data isku dari kartaa software la Barnaamijka kale si ay u horumariyaan qalab cusub.
Waxay leedahay ma interface garaafyada.
Ma ku haboon yahay ka yar users khibrad inkasta oo ay sidaa yiri. Si aad u soo kabsado files warbaahinta, users leeyihiin in ay isticmaalaan amarka PhotoRec.
Qeybta 3: kala duwanaanshaha u dhexeeya Windows 7 iyo daaqadaha xijaab 8 kabashada
Windows 7 ayaa ka dhisay feature soo kabashada. Waa muuqaal weyn, kuwa ayaa preinstalled Windows 7 iyo haysan DVD ah rakibaadda Windows 7. Windows 7 abuuraa ah xijaab gaar ah oo yaryar ku drive ay adag tahay halka ku rakibidda. Windows 7 dukaamada kabaha faylasha nidaamka iyo set buuxda oo qalab soo kabashada in ka mid ah amarka degdeg ah, System Soo Celinta dayactir xawaaladaha, PC Buuxi soo celi, iwm fursadaha waxaa laga heli karaa adiga oo aan gelin ka Windows 7 DVD iyo kabaha ka.
Nidaamka kabashada dhisay Windows 8 ee waa wax ka duwan daaqadaha 7. Waxaa sii daran yahay oo uu bixiyaa badan oo doorashooyin in la soo celiyo aad PC in default ama sida rakibo oo nadiif ah oo Chine aad jeceshahay oo lagama maarmaan ah. Doorashadan waxa noo badbaadiyay waqtiga cunaysa habka foosha xun sida xijaab soo kabashada ku jira rakibo buuxa. Windows 8 abuuraa image soo kabasho ee nidaamka qalliinka in ay xijaab ah drive ka adag. Haddii nidaamka qalliinka waxaa waxyeeleeyeen virus ama spyware ka dibna waxaad u baahan tahay oo kaliya in la soo celiyo image kale ka badan la rakibey hannaanka hawlgalka oo dhan, oo aad ka heli doonaa default warshad Windows rakibo nadiif ah.
> Resource > Hard Drive > All ku saabsan Barzakh Hard Drive Recovery iyo Soo-kabashada ah Barzakh,